Vaovao - Niovaova ny New Coronavirus tany Espana mba hisorohana ny famerenana ny tantara. Angletera, Frantsa, Italia ary Alemana dia nanokatra ny politikan'ny fanakanana indray
Niovaova ny coronavirus vaovao any Espana
Mandritra ny vanim-potoan'ny Halloween, raha ny filazan'ny TIMES dia hifidy ao amin'ny Parlemanta i Britain amin'ny herinandro ho avy. Noho ny fipoahan'ny valan'aretina, i Britain dia hisafidy ny hiditra amin'ny sakana nasionaly alohan'ny fandaharam-potoana indray, izay antenaina haharitra hatramin'ny voalohan'ny volana desambra. Ity dia ho firenena tandrefana iray hafa manandanja taorian'ny fanakanana nifandimby naterak'i Alemana, Frantsa ary Italia. Ny antony lehibe mahatonga ny ahiahin'ireo firenena eropeana dia ny 46% amin'ireo tranga vaovao voamarina manerantany dia avy tany Eropa tamin'ny herinandro lasa teo, ary ny ampahatelon'ny maty dia avy tany Eropa ihany koa. Araka ny tatitra siantifika, ny ankamaroan'ny tranga coronavirus vaovao any Eropa dia avy amin'ny coronavirus miovaova. Ity virus ity dia mety nisondrotra nivantana tany Espana, izay iray ihany koa amin'ny antony lehibe mahatonga ny coronavirus vaovao ho sarotra hifehezana any Eropa ary manana taham-pahafatesana avo be!
Matahotra ny tantara miverina
Ny valanaretina satro-boninahitra vaovao dia mampatsiahy ny olona maro ny fihanaky ny gripa Espaniola tamin'ny tantaran'ny olombelona maoderina. Tamin'izany fotoana izany dia niainga tamin'ny toeram-piompiana amerikana ny gripa Espaniola. Rehefa nandefa miaramila tany Eropa i Etazonia mba handray anjara tamin'ny Ady Lehibe I, dia nitondra virus virtoaly Espaniola niaraka taminy koa io. Rehefa tonga tany Eropa izahay, ireo firenena nandray anjara tamin'ny Ady Lehibe I, toa an'i Britain, France ary Alemana, dia nampiasa fomba fanafenana mba hisorohana ny gripa tsy hanimba ny toe-tsaina teo aloha. Na izany aza, Espaina, firenena tsy miandany tamin'ny Ady lehibe voalohany, dia nanohy nandefa ny isan'ireo maty vokatry ny gripa. Valo tapitrisa ny olona voan'ny gripa, ka voasokajy ho gripa Espaniola io farany. Ny endrika lehibe indrindra amin'ny gripa Espaniola dia ny hoe aorian'ny onjam-peo miova faharoa dia masiaka kokoa ny gripa Espaniôla. Ny isan'ireo tanora sy antonony maty izay no maro an'isa. Raha ampitahaina amin'ny fahafatesan'ny 10 tapitrisa tamin'ny Ady lehibe voalohany dia 50 tapitrisa ny isan'ireo maty vokatry ny gripa Espaniola. ~ Olona 100 tapitrisa. Mirongatra any Eropa ity viriosy satro-boninahitra vaovao ity, i Espana ihany koa no faritra tena voa mafy, ary ny virus miovaova koa dia voamarina any Espana, miaraka amin'ny lesona manan-tantara, ka matahotra ny hamerina ny tantara ny firenena eropeana, ka miseho mitandrina kokoa izy ireo rehefa Miatrika ny onja faharoa amin'ny valanaretina satro-boninahitra vaovao, Tsy misy mpikaroka siantifika na firenena na iza na iza milaza ny fampiasana tsimatimanota andiany hiadiana amin'ny virus coronavirus vaovao.
Fampitahana data ny onja telo an'ny gripa Espaniola
Rehefa avy niaina ny fahafantaran'ny olombelona ny coronavirus vaovao, na dia matanjaka lavitra noho ny gripa Espaniôla izay malaza zato taona lasa aza ny haitao biomédical ho an'ny olombelona, ​​ao anatin'ny faha-iray taonany ny fahazoana ilay coronavirus vaovao, dia eo anelanelan'ny miafina sy asymptomatika io. ny toetran'ny coronavirus vaovao Araka ny tahan'ny, ny fihanaky ny coronavirus vaovao dia matanjaka kokoa, ary na dia ny mpikaroka rosiana iray aza dia voan'ny virus coronavirus vaovao, izay manamafy fa ny coronavirus vaovao dia mety voan'ny indroa na intelo, izay mampiseho koa fa mandaitra dia mandaitra ary ny gripa Espaniola no voalohany. Ny lohataona ny taona 1918 dia nitranga ny sehatra, ary gripa grika mahazatra fotsiny izy io tamin'ny ankapobeny, ary avy eo nanjavona vetivety. Ny tena nisy fiatraikany dia ny onja gripa Espaniola faharoa nitranga tamin'ny fararanon'ny 1918. Io no onja misy taham-pahavoazana ambony indrindra. Tamin'izany fotoana izany dia namakivaky ny hery fiarovan'ny olombelona ny viriosy gripa ary nahatonga ny gripa Espaniola nirehitra indray. Ny fahavitan'ny fahombiazana dia hiteraka fisian'ny virus mahery vaika kokoa. Rehefa nifindra tamin'ny onja faharoa an'ny gripa Espaniola ny rafi-kery olombelona, ​​herintaona taty aoriana dia niseho ny ririnina gripa fahatelo tamin'ny ririnina 1919, ary ny onja fahatelo an'ny gripa Espaniola dia misy taham-pahafatesana eo anelanelan'ny onja voalohany sy onja faharoa!
Noho izany, na dia notapenana tsara tany Chine aza ity valanaretina satro-boninahitra vaovao ity dia tsy tokony hatao ambanin-javatra izany. Rehefa dinihina tokoa, miaraka amin'ny tantara ho fitaratra, ny gripa Espaniola no boky fianarana tsara indrindra amin'ny tantaran'ny valanaretina!